Abavelisi beemveliso zeNkanyezi kunye neFektri - Abavelisi beMveliso yeNkanyezi yaseChina
PP iingxowa ephothiweyo ukwenza umatshini, ukusika kunye nokuthunga. Umatshini odibeneyo odibeneyo wokusika kunye nomatshini wokuthunga. Igcina umsebenzi kwaye yenza iibhegi zivelise ngokulula.
Full Zenzekelayo PP ephothiweyo Bags Cutting & Ukuthunga & Printing Umatshini Integrated
PP iingxowa ephothiweyo ukwenza umatshini, ukusika, ukuthunga kunye nokuprinta. Umatshini odibeneyo odibeneyo wokusika, umatshini wokuthunga kunye nomatshini wokushicilela. Igcina umsebenzi kwaye yenza iibhegi zivelise ngokulula.
Ukusika ngokuzenzekelayo & Ukufaka kunye nokuThunga
PP iingxowa ephothiweyo ukwenza umatshini, ukusika, ukufaka kunye nokuthunga. Umatshini odibeneyo odibeneyo wokusika, ukufaka umatshini kunye nomatshini wokuthunga. Igcina umsebenzi kwaye yenza iibhegi zivelise ngokulula.
Full Zenzekelayo PP Ixabiso Bags Ukwenza Machine
Full Zenzekelayo PP Ixabiso Bags Ukwenza Machine. Ububanzi isicelo: iingxowa zesamente, ibhegi putty olungumgubo njl
PP womluki Cement Bag Ukwenza Machine
PP ephothiweyo umatshini wokwenza ibhegi ekwenziweni. Isizukulwana esitsha sebhloko esezantsi kwebhokisi yokuguqula ingqolowa isebenzisa ubuchwephesha bomoya oshushu we-welding ukuvelisa iingxowa ze-PP ezilukiweyo.
Oluzenzekelayo Isikhongozelo Air Bags & Dunnage Air Bags Ukwenza Machine
Ibhegi yomoya ezenzekelayo egcwele
Umatshini ulungele ubude obumiselweyo, ukumakisha kunye nokusebenza okushushu kweengxowa zelaphu ezinobude obulinganayo.
Ukucanda okushushu kunye nokusika okubandayo konke kuKunye
Lo matshini uyimodeli ephuculweyo, yindibaniselwano ebalaseleyo yokusika okushushu kunye nokusika okubandayo. Ukusika okushushu kunye nokusika okushushu kubanda kungaguqula ngokulula nangokutyibilikayo ngomzuzu omnye ngaphandle kokudilizwa kwamalungu.